यी ३ राशिका युवतीहरुसँगको प्रेम कहिले पनि सफल हुँदैन ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यी ३ राशिका युवतीहरुसँगको प्रेम कहिले पनि सफल हुँदैन !
आज भोली बिवाह अगाबै युवा युवती बीच प्रेम सम्बन्ध रहने गर्छ। यस्ता केही सम्बन्धहरु बिहेमा परिणत हुन गर्छन भने केही छोटो समयमानै अलग हुने गरेको पाईन सकिन्छ।
हरेक पुरुषले आफ्नो जीवनसाथी सुन्दर होस् भन्ने चाहना राख्छन् र उनीहरु रुपको धनिसँगै सफा मन भएका युवतीहरुको साथमा जीवन बिताउने उदेश्यले प्रेम सम्बन्धमा रहने गर्छन। तर, यो सौभाग्य कसैलाई जुर्छ, कसैलाई जुर्दैन।
कोरोना संक्रमणपछि डाक्टरको बिरामीको सेवा गर्ने दुई डाक्टरको प्रेमकथा